Aqriso: 6 qodob oo sabab u ah in madaxda maamul goboleedyada kibraan - Caasimada Online
Home Warar Aqriso: 6 qodob oo sabab u ah in madaxda maamul goboleedyada kibraan
Aqriso: 6 qodob oo sabab u ah in madaxda maamul goboleedyada kibraan
Waxaa sii kordhaaya Khilaaf Siyaasadeedka Dowlada Somalia kala dhexeeya maamul Goboleedyada ka jira dalka, kadib markii ay hawada isku mariyeen hadalo kulul.
Dowlada Somalia ayaa dooneysa inay dib usoo celiso awoodeeda si loo helo wada shaqeyn Dastuuri ah oo ka dhex curta Dowlada iyo maamul Goboleedyada.
Maamulada ayaa dhankooda kasoo horjeeda in lagu xakameeyo Dastuur, iyadoo Hogaamiyayaasha maamuladaasi ay rumeysan yihiin inay meesha ka baxeyso awoodooda.
Siyaasad ahaan markii la qiimeeyo waxaa aad isugu dhow awoodaha Dowlada iyo maamulada oo si siman uga wada shaqeeya dalka, waxa ayna taa cuuryaamisay in dalka uu ka dhaqan galo awaamirta dowlda.
Haddaba qiimeyn la sameeyay ayaa waxaa arrimahaasi lagu ogaaday inay ka danbeeyen dhow qodob oo aan kasoo qaadan doono 6 qodob oo kala ah:
1-Baarlamaanka oo aan isla xisaabtan la sameyn Hoagaamiyayasha maamul Goboleedyada oo keentay in maamulada ay ku awood noqdaan Dowlada.
2-Hogaamiyayaasha Maamul Goboleedyada oo Siyaasad ahaan ku xiran dalalka Shisheeye oo qaab ahaan ay ugu shaqeeyan ‘’Ka iibsashada macluumaadka dalka’’
3-Dalalka shisheeye sida Ethiopia iyo Kenya oo dhaqaale lagu arbusho Qaranimada Somalia ku bixiya maamul Goboleedyada.
4-Hogaamiyayaasha iyo maamulkooda oo rumeysan misna aaminsan inay ka awood badan yihiin Dowlada FS, iyagoo ku tashanaaya Xildhibaanada labada aqal ee laga soo kala xulay deegaanadooda.
5-Dowlada Somalia oo qudheeda aaminsan in maamul Goboleedyada ay yihiin awoodo aan la taabankarin, sababo la xiriira dalalka Shisheeye iyo inay adeegsadaan Xildhibaanada ugu jira labada Gole.
6-Baarlamaanka Somalia oo aan maamulada u aqoonsaneen in ka maamul ahaan ay hoostagaan Dowlada, taasina ay meesha ka saartay in maamulada ay ku dhaqmaan awood lamid ah tan dowlada.
Maamul Goboleedyada ayaa inta badan u caga jugleeya Dowlada Somalia, waxa ayna taa ku imaadaa kadib markii laga hor istaago ku dhaqanka Heshiisyo qarsoodi ah iyo in awoodaha Dowlada ay isticmaalan, iyadoo aan la wargalin Dowlada Federaalka ah ee Somalia.
Sidoo kale, Dowlada Somalia ayaan Siyaasad ahaan aaminsaneyn inay gacan ku dhigi karto awoodaha maamul Goboleedyada, sababo la xiriira iskaashi ka dhexeeya dhammaan maamulada iyo Dowlada oo cadaadis hoosaad kala kulmeysa Xildhibaanada laga soo xulay deegaanada maamulada.
Dhammaan arrimahaani isbiirsaday ayaa kusoo beegmaaya iyadoo dowlada Somalia aysan laheyn itaal ay ku maareynkarto maamulada dalka, maadaama Dastuurka dalka uu yahay mid gacan ku rimis ah.
Si kastaba ha ahaatee, waxa ay kusoo beegmayaan iyadoo uu jiro khilaaf maamulada kala dhexeeya Dowlada Somalia, kadib markii ay la safteen dowlada Imaaraadka oo ka gudubtay xeendaabka.
W/Q: Cabdullaahi Axmed Cusmaan